एक झा*पड भेटेपछि बाबुराम भट्टराईको देब्रे आँखा गा,यब – ताजा समाचार
एक झा*पड भेटेपछि बाबुराम भट्टराईको देब्रे आँखा गा,यब
काठमाडौं। डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले चुनाव चिन्ह झा*पड पाएको छ । समाजबादी पार्टीले चुनाव चिन्ह झा*पड पाएपछि नयाँ शक्ति पार्टीको चुनाव चिन्ह देब्रे आँखा गा,यव भएको छ । संघिय समाजबादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर बनेको नयाँ पार्टी समाजबादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएर चुनाव चिन्ह झा*पड दिएपछि बाबुरामको देब्रे आँखा गा,यब भएको हो ।
आउँदै गरेको उपनिर्वाचनका लागि आयोगले डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको सो पार्टीलाई चुनाव चिन्ह एक झा*पड दिएको छ । पाँच औंला भएको हत्केलालाई चुनाव चिन्ह दिएको छ । यसअघि संघिय समाजबादी फोरमको चुनाव चिन्ह म,साल थियो भने नयाँ शक्ति पार्टीको देब्रे आँखा थियो । नेपाली समाजमा पाँचओटा औंलासहित हत्केला भएको हातलाई झा*पड भन्ने गरिन्छ ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : November 11th, 2019,